လေဖြတ်ရောဂါအတွက် ဘိုးတော့စ်ထိုးကုသခြင်း - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » လေဖြတ်ရောဂါ » လေဖြတ်ရောဂါအတွက် ဘိုးတော့စ်ထိုးကုသခြင်း
ဘိုးတော့စ်အကြောင်း သင်ကြားဖူးနားဝရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာလုံးကို ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သင့်ခေါင်းထဲပထမဆုံး ဝင်ရောက်လာတာ ဘယ်အရာပါလဲ။ အလှအပရေးရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ၊အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှုတွေ၊မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်းကို ကုသခြင်းတွေ စတာတွေ သင့်ခေါင်းထဲဝင်လာဖို့ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အထက်ပါ လူသိများပြီးသား အချက်တွေကို ဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင်မသိသေးတဲ့ ဘိုးတော့စ်ရဲ့ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတမျိုးကို ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ မျှဝေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ လေဖြတ်ရောဂါအတွက် ဘိုးတော့စ်ကုထုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုးတော့စ်လို့လူသိများတဲ့ Botulinum toxin type A ဟာ Clostridium botulinum ဘက်တီးရီးယား ကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်အဆိပ်တမျိုးဖြစ်ပြီး အပြင်းထန်ဆုံးအဆိပ်တွေအနက် တခုအပါအဝင်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အသက်အန္တရာယ်အထိ ရန်ရှာနိုင်တဲ့ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘိုးတော့စ်အဆိပ်နဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာ၊မေးစေ့၊လည်ပင်းနဲ့ ရင်ဘတ်က အရေးအကြောင်းတွေ၊ပါးရေတွန့်ခြင်းတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် ဘိုးတော့စ်ကို အလှအပရေးရာမှာ သုံးလေ့ရှိသလို အချို့သော ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကုသဖို့အတွက်လည်း ဘိုးတော့စ်ကို အသုံးပြုတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဘိုးတော့စ်ရဲ့ အာနိသင်က ကာလကြာရှည်စွာ မခံဘူးဆိုပေမယ့် အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊အလျင်အမြန် အကျိုးသက်ရောက်မှုရခြင်း စတဲ့ ထူးခြားချက်တွေကြောင့် ထင်ရှားပါတယ်။ ဘိုးတော့စ်ထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မိနစ်အနည်းငယ်သာ ကြာမြင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊နို့တိုက်မိခင်တွေ ဒါမှမဟုတ် botulinum အဆိပ်နဲ့ ဓါတ်မတည့်ဖူးသူတွေမှာတော့ ဘိုးတော့စ်ကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
လေဖြတ်ရောဂါအတွက် ဘိုးတော့စ်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
ဘိုးတော့စ်ကို အသားထိုးဆေးအဖြစ် အသုံးပြုရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက လူနာရဲ့ကြွက်သားထဲကို ဆေးထိုးထည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပေါ့။ ဘိုးတော့စ်ထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါ အကြောဆိုင်းပြီး တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြန်လည်ပျော့ပျောင်းလာအောင် ကူညီပေးနိုင်သလို အချို့သော အာရုံကြောတွေကိုလည်း ပိတ်ဆို့ပစ်နိုင်ပါတယ်။ လေဖြတ်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတဲ့ လူနာတွေဟာ ကိုယ်တခြမ်းလုံးက ခြေလက်တွေ တောင့်တင်းနေတဲ့အတွက် နိစ္စဓူဝလုပ်ဆောင်စရာတွေ (ဥပမာ လက်သည်းညှပ်ခြင်း၊အဝတ်အစားလဲခြင်း၊မတ်မတ်ရပ်ခြင်း၊ဟန်ချက်ညီညီလမ်းလျှောက်ခြင်း၊အိပ်ယာပေါ်မှာ ဟိုသည်လှိမ့်ခြင်း စသည်)ကို ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလိုလူနာတွေကို ဘိုးတော့စ်က ကောင်းစွာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘိုးတော့စ်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ကို နှစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ မြင်ရနိုင်ပေမယ့် ဒီအာနိသင်တွေက တာရှည်တော့ မခံပြန်ပါဘူး။
ဘိုးတော့စ်ထိုးခြင်းကို ကိုယ်ခန္ဓါပြန်လည်သန်စွမ်းရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုမှသာ ပိုမိုအာနိသင်ထက်မြက်ပြီး အာနိသင်လည်း ပိုကြာကြာခံမယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက အကြံပြုလေ့ရှိပါတယ်။ သင့်ကြွက်သားတွေရဲ့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိအောင် ဘိုးတော့စ်က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပိုမိုအဆင်ပြေပြေ လှုပ်ရှားလာနိုင်မှာပါ။ လက်ဆေးခြင်း၊စာရေးခြင်း၊အစာစားခြင်း အစရှိတဲ့ နိစ္စဓူဝပြုဖွယ်တွေဟာလည်း မူလကလိုပဲ သင့်အတွက် ပြန်လည်လွယ်ကူလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘိုးတော့စ်ထိုးခြင်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကုသမှုလား။
ဘိုးတော့စ်ထိုးခြင်းဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ကုသမှုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘိုးတော့စ်ထိုးခြင်းဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သလို ကာလကြာရှည်စွဲသုံးရင်လည်း စိတ်ချရခြင်းရှိမရှိ ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘိုးတော့စ်ဟာ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့စေပြီး လှုပ်ရရှားရ ပိုအဆင်ပြေလာစေတဲ့အတွက် စမ်းကြည့်လို့တော့ အကျိုးမယုတ်တာ သေချာပါတယ်။
ဘိုးတော့စ်ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း : နှစ်ထပ်မြင်ခြင်း၊အမြင်အာရုံဝေဝါးခြင်း၊မျက်ခွံကျခြင်း၊မျက်စိခြောက်သွေ့ခြင်း။
ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း : အနီစက်များ ထွက်ခြင်း၊ထိုင်းမှိုင်းငိုက်မျဉ်းခြင်း၊အသက်ရှုလျှင် တရွှီရွှီ အသံမြည်ခြင်း။
အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ ရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်ကျော်ကြာတဲ့အခါ ပြန်လည်ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ ပျောက်ကွယ်မသွားသေးဘဲ သင့်ကို အနှောင့်အယှက် ပေးနေဆဲဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။ ဘိုးတော့စ်ထိုးထားတဲ့နေရာကို (ဆေးထိုးပြီး) ၁၂ နာရီအတွင်း လုံးဝသွားမပွတ်ပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် ဆေးထိုးပြီးတနာရီအတွင်းမှာလည်း လဲလျောင်းခြင်း မပြုရပါဘူး။
လေဖြတ်ဝေဒနာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကို ခါးစည်းခံနေရတဲ့ လူနာတွေအတွက် ဘိုးတော့စ်ထိုးခြင်းဟာ အာနိသင်ထိရောက်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ ကုထုံးတမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာလည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကုသမှုကို မခံယူခင်မှာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ သေချာစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရပါမယ်။
လေဖြတ်ပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
မွေးကင်းစနှင့် ကလေးငယ်လေးတွေမှာ လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မလဲ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုင် 6, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 14, 2019
http://www.aocd.org/?page=Botox. Accessed April 30, 2017.
https://medlineplus.gov/botox.html. Accessed April 30, 2017.
Can Botox aid stroke victims?
http://edition.cnn.com/2008/HEALTH/dailydose/11/20/botox.stroke/index.html. Accessed April 30, 2017.
Botox Frees Muscles for Stroke Patients in the Know.
http://www.nytimes.com/2009/03/24/health/24botox.html. Accessed April 30, 2017.
သွေးတိုးကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေထိခိုက်လာနိုင်သေးလဲ
နိုင်ငံတကာ သတင်းများ, ဆေးပညာနောက်ဆုံးသတင်းများ
လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး,မိသားစုနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဘယ်လိုဖိအားတွေ သက်ရောက်စေလဲ